के बोल्ने शैलीका आधारमा मान्छे चिन्न सकिन्छ ? के बोल्ने मानिस कस्ता हुन्छन्
मानवको शारीरीक अंग मध्ये मुखाकृतीबाट उत्पन्न हुने अभिव्यक्तिलाई बोली भनिन्छ । आफ्नो अभिव्यक्ति वा विचार प्रकट गर्न जीवन भोगिरहदा, यात्रा गरिरहदा, बाटो हिडिरहदा, हामी कयौँ मान्छेसँग भेट्छौ, भलाकुसारी गर्छौँ, आत्मीयता देखाउँछौ, आफ्नोपन बढाउछौँ । यस्तोमा धेरै मानिसहरु साथी बन्छन् । जीवनको वास्तविकता यस्तो हुन्छ कि केही मित्रताहरु क्षणिक समय टिक्छन्, केही मित्रताहरुले लामो समयसँग यात्रा गर्छन् ।
र, अर्को वास्तविकता यो पनि हो कि हामीले भेटेका र साथी भनिएका सबै मानिसहरु भरोसा योग्य हुदैनन् तर चिन्ने कसरी ? यसको सजिलो जवाफ छैन । कहिलै पनि पहिलो भेटमा नै सच्चा मित्र चिन्न सकिदैन । न त निधारमा नै असल खराब लेखेर छुट्याइदिएको हुन्छ । न त कुनै साङकेतिक अर्थमा पहिल्याइदिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा पनि हामी मान्छे चिन्न सक्दैनौं ।
तर, मानिसका केहि बिशेषताहरुबारे थाहा पाउँन सकिन्छ । केहि भेटघाट र समय बिताए पछि मानिसको व्यवहार र सोचाइका बारेमा संकेतहरु हेरेर आफुले संगत गरेको मानिस भरोसायोग्य हो कि होइन भन्ने थाहा पाउँन सकिन्छ । कस्ता मानिसहरु भरोसा गर्न लायक छन् भन्ने थाहा पाउँन एउटा पुरानो कथा पनि उपयोगी हुन सक्छ
यस्तो मानिस धेरै बोल्न रुचाउछन एताको कुरा उता लगाउँछन् । उताको कुरा यता गर्नमै उनीहरुले समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छन् । धैर्यता गर्ने बानी यीनीहरु हुँदैन । यस्ता मानिस ध्रुत हुन्छन् र यीनीहरुसँग सधै सावधान रहनु पर्छ । कुरौटे मानिसमा गोपनियता हुदैन, नोक्सान मात्र पुर्याउँछन्, झगडामात्र पारिदिन्छन् ।